Iyo App Store ichagamuchira shanduko dzakakosha mukushanda kwayo | IPhone nhau
Iyo App Store ichagamuchira shanduko dzakakosha mukushanda kwayo
Zvinotaridza kuti iyo Cupertino-yakavakirwa kambani tIyo ine nhamba huru yenhau yekutiratidza isu Muvhuro unotevera kuConference yekuvandudza uko uko nhau dzeanoshanda masystem ayo kambani inogadzira ichaunzwa uye yatanga kuzivisa zvimwe zvekuchinja izvo isu zvatichakwanisa kuona munguva pfupi mumasevhisi ayo iyo kambani inotipa nhasi.
Kupfuura rinopfuura vhiki rapfuura takakuzivisa nezve shanduko idzo Apple TV application chitoro yainge yagamuchira, mairi maapplication atove akaiswa pachigadzirwa, haina kuoneka muApp Store. Kunyangwe paine zvichemo zvakagamuchirwa nekambani, zvinoita sekunge iyo Cupertino-yakavakirwa kambani inotarisira kufamba zvakafanana, asi panguva ino paApp Store.
Zvinotaridza kuti sezvo Phil Schiller atora zvitoro zvekambani, anoda kuvandudza nzira yatinovaziva nayo, nekuti iyi handiyo chete shanduko yatichaona munguva pfupi muzvitoro zveApple. Sezvakataurwa naSchiller, Apple inoda kuramba ichikwezva kufarira kwevanogadzira uye nekuda kweizvi, ichadzikisa muzana yayo kubva pane iripo 30% kusvika pa15% kana chikumbiro chave pamusika kweinopfuura gore.
Zvakare, munguva pfupi, mitambo yese nemaapplication achakwanisa kushandisa kunyorera seNetflix, Spotify ..., kunyoreswa izvo parizvino zvakaganhurirwa kune izvi zvemukati parizvino, asi kwemwedzi mishoma, hatizokwanise kuziva kuti ndevapi vanogadzira vanouya neiyi nyowani yekunyorera sarudzo, nekuti ini handifunge kuti vanhu vanoda kubhadhara mubhadharo wemwedzi wega wega kuti vanakirwe nemitambo yavo yavanofarira.
Vazhinji ndivo vagadziri vanogunun'una nezve mhedzisiro iyo iyo App Store inopa pane yayo huru peji uye kubva ikozvino zvichienda kuvandudzwa kwemaapplication aya kuchakurumidza kupfuura izvozvi. Mumavhiki apfuura nguva yekuongorora yakapfupikiswa kubva pavhiki kusvika pamazuva mashoma, izvo zvinoratidza kuti Apple iri kuwedzera kuzvipira kune vanogadzira
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iyo App Store ichagamuchira shanduko dzakakosha mukushanda kwayo
Ray Liotta naNaomi Campbell nyeredzi mune nyowani Apple Music kushambadzira padhuze naDJ Khaled
Imwe nzira yeApple Pay, CurrentC yave kuda kuvhara